Shahaadooyinka SSL-ku-is-saxeex ee ku jira Chrome 58 > Vielhuber David
Shahaadooyinka SSL-ku-is-saxeex ee ku jira Chrome 5811
Maaddaama Aynu Qarsoodi doonno , degellada internetka ee la duugay hadda waa heer. Xitaa iyada oo horumarka maxalliga ah, shahaadooyinka SSL-ka ay noqdeen wax aan lagama maarmaan ahayn (tusaale ahaan, navigator.geolocation wuxuu u baahan yahay in SSL gudaha lagu keydiyo). Laga soo bilaabo nooca 58 ee Chrome, taageerada CN (Magaca Guud) waa la joojiyay iyo SAN (Magaca Beddelka Mawduuca) ayaa laga dhigay mid khasab ah. Natiija ahaan, Chrome si lama filaan ah uma aqbasho dhammaan shahaadooyinka SSL ee si caadi ah loo abuuray.
Waxaad u isticmaali kartaa aaladaha internetka sida ZeroSSL si aad u soo saarto shahaadooyin ama aad u isticmaasho bilowga bilowga sida --ignore-certificate-qalad ama calanka chrome: // calamada / # u oggolow-amni darrada-localhost si aad u hesho Chrome inuu u shaqeeyo iyada oo aan la helin shahaadooyin sax ah; Si kastaba ha noqotee, waxaan dooneynaa inaan u adeegsano OpenSSL si aan u abuurno shahaadooyin iskood u saxeexan oo maxalli ah oo ka kooban SAN oo ay si buuxda u aqbalaan Chrome. Nidaamkan hal-doorka ahi wuxuu daryeelaa wax kasta oo lagama maarmaan ah (kaliya www.tld.local waa in lagu beddelaa bogga la doonayo):
Maaddaama OpenSSL nasiib darro aysan lahayn doodo toos ah oo lagu caddeeyo SAN, feyl fayl ah ayaa marka hore la sameeyaa, OpenSSL ayaa loogu yeeraa iyada oo feylka markaa la tirtiro. Isticmaalayaasha Windows waxay si fudud u fulin karaan amarkan iyagoo gacan ka helaya Cygwin (iyo bash -c "...") ama WSL cusub. Labada feylood ee ka dhashay www.tld.local.key iyo www.tld.local.cert ayaa markaa lagu dooran karaa MAMP, tusaale ahaan:
Isticmaalayaasha Windows ayaa markaa ku hoos shubta "Maamul shahaadooyinka isticmaalaha" (certmgr) ee "hay'adaha caddeynta xididdada aaminay":
Ugu dambeyntii, dib u bilow Chrome (chrome: // dib u bilaabi) oo ku raaxee qufulka cagaaran: